Fitsipika 10 momba ny fomba hamaliana ny famerenana ratsy amin'ny Internet | Martech Zone
Fitsipika 10 momba ny fomba hamaliana ny fanadihadihana ratsy eto amin'ny Internet
Alahady, Septambra 19, 2021 Alahady, Septambra 19, 2021 Douglas Karr
Mety ho sarotra ny mitantana orinasa. Na manampy ny orinasa amin'ny fanovana dizitaly ianao, namoaka rindrambaiko finday, fivarotana antsinjarany, ny mety tsy hahatratraranao ny andrasan'ny mpanjifanao indray andro any. Ao amin'ny tontolo sosialy miaraka amin'ny besinimaro naoty sy hevitra, efa ho avy tsy ho ela ny fahafahanao mahazo famerenana ratsy amin'ny Internet.
Na dia eo imasom-bahoaka na tsia ny naoty ratsy, dia ilaina tokoa ny ahalalanao fa ny valinteninao tamin'io naoty na fanamarihana ratsy io dia manan-danja ihany - raha tsy manandanja kokoa. Ny valiny tsara amin'ny famerenana ratsy dia mety hitondra fanajana bebe kokoa sy fahatokisana ny orinasanao. Fantatry ny orinasa sy ny mpanjifa maoderina fa tsy ho lavorary ny fifandraisan'ny orinasa rehetra… fa ny fandraisan'ny orinasa iray azy rehefa tsy mandeha izy dia tena zava-dehibe.
Manoratra ity lahatsoratra ity aho mifototra amin'ny zavatra niainako anecdotal tamin'ny fomba nahitako ny fandresen'ny orinasa ny famerenana ratsy - Tsy hitady fandinihana na data aho satria mieritreritra aho fa ny orinasa tsirairay dia manana kolontsaina sy fizotrany izay tsy mety foana noraisina tamina antontan'isa maromaro. Ity ny lisitry ny toro-hevitra sy ny dingana hamaliana ny famerenana ratsy.
Tsy maintsy mamaly ianao… - Ilaina ny valiny eo noho eo mba hanomezana ny mpanjifa sy orinasa hafa ny fahatsapana fa mihaino ianao ary miahy anao. Tsy midika izany fa tokony hanatsoaka hevitra ianao. Indraindray ny famaliana dia milaza fotsiny fa efa naheno ny fitarainana ianao ary manadihady ny zava-misy ary koa ny fomba hamahana izany.
Miezaha hangoraka - Mariho ny fomba tsy nitenenako fangorahana? Tsy fotoana hisehoana ho miraharaha anao io, fa fotoana hieritreretana tanteraka ny fahitan'ny mpanjifa na ny mpanjifa mahatsapa fa nahazo serivisy ratsy izy ireo. Rehefa mamaly ity olona ity ianao dia mody manao hoe izy ireo dia nahazo ny andro mahatsiravina indrindra tamin'ny fiainany. Nisy mpitarika iray nilaza tamiko fa isaky ny manao resa-be resaka amina mpiasa iray izy dia mody lazainy fa very olona iray fotsiny ny mpiasa. Heveriko fa izany dia torohevitra tsara amin'ny Internet ihany koa.
Misaora - Na dia vitsy dia vitsy aza ny olona any izay tsy faly fotsiny, dia mitaraina ampahibemaso ny ankamaroan'ny olona satria miahy ny amin'ny fomba nitondranao azy ireo izy ireo ary manantena fa tsy hataonao amin'ny mpanjifa hafa amin'ny ho avy izany. Ny hoe nisy olona nanokana fotoana hanoratana momba ny olana iray eo amin'ny orinasanao izay mety hisy fiatraikany amin'ny olona maro hafa dia valiny tsy voavidy ho anao hanatsara ny orinasanao.
Henoy - Raha tsy tanteraka ny antenaina dia henoy tsara ny mpanjifanao momba ny fanatsarana ny fomba anatiny. Ho gaga ianao amin'ny mpanjifa maro te-ho tonga tsotra fotsiny nihaino rehefa mivoaka izy ireo. Indraindray dia manontany fotsiny hoe: "Ahoana no nahavitantsika tsaratsara kokoa?" mety hitarika tamberina tsy mampino momba ny orinasanao izay hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny.
Miezaha ho zava-misy - Tsy fahita firy ny olona manitatra toe-javatra rehefa mamela ny fijerena ratsy. Indraindray, ireo mpandinika an-tserasera dia mandainga tanteraka. Tsy maninona ny manome valiny marina momba ny fijerena ratsy raha toa ka tsy manafika ny mpandinika ianao amin'ny vola rehetra. Toe-javatra marefo io, saingy tsy tokony havelanao handeha mihitsy ny lainga momba ny orinasanao.
Mitadiava fanapahan-kevitra - Ilaina ny mitady vahaolana. Nahazo fampiasam-bola lehibe tamin'ny mpanome tolotra trano aho taona vitsivitsy lasa ary loza ny toe-javatra iray manontolo. Taorian'ny nametrahako famerenana lava tamin'ny Internet tamin'ny antsipiriany rehetra, ny tompon'ilay orinasa (izay tsy nahalala ny zava-misy) dia nanatona ahy manokana ary nanontany hoe: "Ahoana no ahafahantsika manao an'izany?". Tsy tonga lafatra ny vahaolana fa nesoriko kosa ny famerenana ratsy taorian'ny nanambanan'ny orinasa fotoana sy hery hanandramana ny toe-javatra.
Raiso an-tserasera - Ny fananana adihevitra etsy sy eroa amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny mailaka aza dia tsy hanampy ny lazan'ny orinasanao. Ny ohabolana taloha izay "derainay imasom-bahoaka, ahitsiana manokana" dia azo ampiharina amin'ny toe-java-misy ratsy. Mandrosoa foana ny fotoana hiresahana amin'ny olona iray mba hahafahan'izy ireo mandre ny fiahianao anao ary avelao izy ireo hamoaka ny fahasosorany. Ny famakiana lahatsoratra dia tsy manome fangorahana amin'ny valiny. Raha maniry ny mamely anao hatrany amin'ny Internet ny mpandinika dia tsy maninona ny mamaly tsotra izao fa misokatra foana ny varavaranao fa mila raisinao amin'ny Internet izany.
Mametraha tarehy amin'ny valinteninao - Tsy misy olona mankafy ny kopia / mametaka autoresponse avy amin'ny orinasa goavambe. Rehefa manoratra ny valinteninao ianao dia apetraho ny anaranao sy ny mombamomba anao mba hahitan'ilay olona fa misy tena olona iray izay tompon'andraikitra amin'ny famahana ny toe-javatra.
Ataovy fohy - Ny valiny fohy indrindra azo atao dia ny valiny tsara indrindra amin'ny famerenana ratsy amin'ny Internet. Misaotra an'io olona io, ekeo ny olana, miasà vahaolana, ary omeo ny fampahalalana momba ny fifandraisana hanohizanao ny vahaolana iray ivelan'ny toerana. Tsy mila manoratra fehintsoratra sy fehintsoratra izay tsy misy mamaky na manome lanja ny olona.
Araho ny Internet rehefa ilaina - Matetika aho mahita tsikera ratsy amin'ny Internet momba ny fampiharana finday izay manondro bibikely izay namboarina tamin'ny kinova ho avy. Tena manakiana tokoa ny fanambarana ampahibemaso fa voavaha ny olana ary misaotra an'ilay olona nitory izany. Tsy izany no ilaina amin'ny fanapahan-kevitra manokana… fa ny fizotran'ny besinimaro na ny fanovana ny vokatra izay namaha ny olana ho an'ny mpanjifa marobe. Ny mpandinika iray dia tsy te hahita anao mandefa ny vahaolana amin'ny toe-javatra iainan'izy ireo an-tserasera ho fampiroboroboana ny orinasanao.
TSY mety foana ny mpanjifa
Tsy izany ny mpanjifa foana marina. Heveriko fa izany no iray amin'ireo fiteny ratsy indrindra. Nifanena tamina mpanjifa tena tsy mahalala fomba aho tamin'ny fiainako. Niantehitra tamin'ny zava-misy foana aho rehefa tonga tamin'ireny toe-javatra ireny ary nanalavitra ny valiny na fiampangana ara-pientanam-po. Indrindra rehefa tonga amin'ireo mpiasako izay nandeha nihoatra ny avo indrindra tamin'ny fiezahana hamaha ny toe-javatra.
Aleoko mihazona sy miaro mpiasa tsara toy izay very mpanjifa ratsy izay mandainga amin'ny toe-javatra iray.
Trano fisakafoanana iray niarahako niasa no nanana hevitra tsy nampoizina, tsy fantatra anarana ary ratsy naneho hevitra momba ny lovia izay tsy natolotr'izy ireo akory. Namaly an-tsary ny zava-misy izy ireo raha nanalavitra ny fifanandrinana tamin'ilay mpandinika an-tserasera.
Aza manafika ny mpandinika mihitsy
Aza manafika mihitsy na manizingizina fa mandainga ny mpandinika anao na mifamaly amin'ny mpitsikera an-tserasera. Ny famaliana ny famerenana ratsy miaraka amin'ny tsy fitovizany kokoa dia fomba azo antoka fandevenana ny lazan'ny orinasanao amin'ny maha-orinasa mikarakara, mangoraka ary mahay mandanjalanja. Tsy maninona ny miaro lainga mibaribary momba ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampiasana zava-misy… fa aza manafika ilay mpandinika na manantitrantitra fa diso izy ireo. Ny fiantsoana mpanjifa izay nandoa anao ho mpandainga an-tserasera dia tsy hitondra orinasa lehibe intsony araka ny fanao.
Ohatra amin'ny valiny fanamarihana ratsy
Te-hanome ohatra vitsivitsy momba ny valiny fanamarihana ratsy izay mety hanampy anao amin'ny famolavolana valiny mety hanampy anao hanatsara ny lazanao amin'ny Internet. Ireto misy toe-javatra vitsivitsy:
Famerenana ratsy iray mila fikarohana bebe kokoa
[Anaran], misaotra anao nanisy izany. Raisinay am-pitandremana tokoa ny hevitry ny mpanjifanay ary te hihoatra ny zavatra antenaina foana izahay. Manadihady momba an'ity olana ity izahay ary hifandray ao anatin'ny 2 andro fiasana ny mpiasanay. Tianay ny mandre bebe kokoa momba an'io toe-javatra io ary hanome lanja ny hevitrao. Tsy maninona ve raha nifandray tamina finday izahay? Aza misalasala mandefa hafatra amiko [Ny Anarako] na miantso ny extension amiko [X] amin'ny [Nomery telefaona].
Famerenana Negative tsy fantatra anarana
Misaotra anao nanisy izany. Raisinay am-pitandremana tokoa ny hevitry ny mpanjifanay ary te hihoatra ny zavatra antenaina foana izahay. Tianay ny mandre avy aminao mba hahafantatra bebe kokoa momba an'io toe-javatra io. Tsy maninona ve raha nifandray tamina finday izahay? Aza misalasala mandefa hafatra amiko [Ny Anarako] na miantso ny extension amiko [X] amin'ny [Nomery telefaona].
Famerenana ratsy diso
[Anaran], tsy manolotra an'io vokatra io izahay. Azonao atao ve ny mifandraisa amiko [Ny Anarako] na miantso ny extension ahy [X] amin'ny [Nomery telefaona] hahafahanay mahita vaovao misimisy momba an'io toe-javatra io?
Famerenana tena ratsy
[Anaran], misaotra anao nanisy izany. Tianay foana ny hihoatra ny zavatra andrasan'ny mpanjifa ary ity dia toa fotoana lehibe ahafahanay manao izany. Tianay ny hiresaka aminao manokana hanatanterahana izany aminao satria zava-dehibe aminay ny orinasanao. Tsy maninona ve raha nifandray tamina finday izahay? Aza misalasala mandefa hafatra amiko [Ny Anarako] na miantso ny extension amiko [X] amin'ny [Nomery telefaona].
Mpanadihady maharatsy izay mitohy mandeha foana
[Anarano], indrisy, mandra-piresahanay aminao manokana hanadihady an'ity toe-javatra ity dia tsy ho voavahanay eto ny raharaha. Azafady alefaso amiko ny hafatra [Ny Anarako] na antsoy ny extension [X] amin'ny [Nomera telefaona].
Dingana voavaha avy amin'ny famerenana ratsy
[Anaran], misaotra betsaka anao nitondra ity olana ity teo am-pelatananay ary nandany fotoana niaraka taminay hamahana ny olana. Amin'ny maha FYI ho an'izay manaraka an'ity olana ity amin'ny Internet, dia novainay ny vokatray / ny fomba fanaovanay ary nofoananay io olana io hatramin'ny [daty].
Tsy maninona ny miala amin'ny famerenana ratsy
Indraindray tsy mandeha amin'ny laoniny ny fanaovana raharaham-barotra. Azonao atao ny manandrana ny zava-drehetra hamaha ny famerenana ratsy ary mety tsy hiteraka karazana fanapahan-kevitra mety hampihemotra ny mpanjifa na hanala ilay hevitra. Hitranga izany.
Raha mbola hitan'ny mpanjifa sy ny orinasa fa nanao izay rehetra vitanao ianao mba hanandramana sy hamaha ny toe-javatra nateraky ny famerenana ratsy dia homeny anao ny tombotsoan'ny fisalasalana.
Ny valiny tsara indrindra amin'ny hevitra ratsy dia hevitra bebe kokoa
Raha miady amin'ny famerenana ratsy vitsivitsy ny orinasanao izay tsy hiala fotsiny, ny vahaolana tsara indrindra dia ny fangatahana mpanjifa faly ary atosika izy ireo hanome tsikera mamirapiratra ho an'ny orinasanao. Na dia maro aza ny mpanjifa no hitsambikina hamaky ireo hevitra ratsy (ataoko), tsy misy isalasalana fa ny isan-jaton'ny fanamarihana lehibe dia hisy fiatraikany amin'ny fahitany ny lazanao.
Ary, mazava ho azy, ny mahita valiny feno fiheverana isaky ny fijerena ratsy izay nanandramanao hamahana vahaolana dia hanampy bebe kokoa!
Tags: ahoana nofamerenana ratsy amin'ny Internetvaliny famerenana ratsyhevitra ratsyFanamarihana an-tseraserahevitra
Ahoana ny fomba hanampiana ny masoivohonao hitantanana ny lisitry ny orinasanao Google